भर्खरै बिबाहित बन्धन मा बाधिएका जोडि श्रीमान को निधन खबर सुनेर श्रीमतीको पनि निधन। – Sandesh Press
भर्खरै बिबाहित बन्धन मा बाधिएका जोडि श्रीमान को निधन खबर सुनेर श्रीमतीको पनि निधन।
बढो अजिब छ जिन्दगी कोहि मर्दा पनि संगै मरेर जान्छन् कोहि बाच्दा पनि संगै बस्न सक्दैनन
तस्बिर बोल्ने मात्र होइन कहिलेकाही बेस्सरी चिच्याउछ पनि…उत्तम दाहाल मृत्यु भएको लगतै श्रीमतीको पनि मृत्यु भएको खवरले अति नै दुःखी बनायो पशुअधिकार कर्मी उतम दाहाल बिरामी हुदा देखीनै तपाई मर्नु भयो भने म बाच्न सक्दिन भन्नु हुन्थियो रे आज जस्तो भनेको उस्तै पुग्यो के होला यो
दैब को लिला भर्खरै बिबाह बन्दन मा बादिएको जोडि दुबै ले यो सन्सार त्याग गर्नु भयो उहाँ हरु को कलिला सन्तानको के हालत भयो होला एस्तो कसैलाइ ननपरोसआज उहाँ बितेको खवर पत्याउन सकेको छैन दुबै जनाको स्वर्गमा वास होस र सोकाकुल परिवार मा धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस
फेरि पनि मुना मदन को जस्तै जोडि लाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
काठमाडौ । पोखरामा अक्सिजन अभावमा एक सुत्केरी सहित ७ जनाको मृत्यु भएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक सुत्केरी महिलासहित ७ जनाको बिहीबार राति मृत्यु भएको हो ।
हाइ फ्लो अक्सिजन पर्याप्त नहुँदा बिरामीले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ । पछिल्लो तीन दिनयता अक्सिजनको आवश्यकता बढी भएका बिरामी आइरहेको र माग र आपूर्ति अनियमित हुँदा समस्या परेको अस्पतालको भनाइ छ ।
तनहुँ, भानुकी २५ वर्षीया गर्भवतीलाई गत शुक्रबार दिउँसोदेखि नै सुत्केरी व्यथा लागेको थियो। श्रीमान र उनका भाञ्जाले त्यही दिन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल ल्याएका थिए।
अस्पतालमा पिसिआर परीक्षण गर्दा उनको रिपोर्ट कोरोना पोजेटिभ आयो। बच्चा जन्मिएपछि सुरुमा बच्चालाई पोजेटिभ रिपोर्ट आएको भएपनि पछि नेगेटिभ आयो । अहिले बच्चाको स्वास्थ्य सुधार हुँदै गएको छ । तर उनले आमाको दुध खान पाएनन् ।
सुत्केरी आमालाई भने श्वास फेर्न गाह्रो हुँदै गइराखेको थियो। अस्पतालले अचानक बिहीबार रातीदेखि अक्सिजनको अभाव भएको जानकारी बिरामी र तिनका आफन्तलाई दियो। महिलाका आफन्तले अक्सिजन उत्पादन हुने क्षेत्र देखि हिमाल आरोहण गर्ने स्थान सम्म अक्सिजनको खोजी गरे ।
अन्त्यमा हिमाल आरोहण गर्नेले प्रयोग गर्ने सानो अक्सिजन सिलिण्डरले भएपनि बचाउन खोजिएको थियो । तर यता सुत्केरीको राती करिब साढे १० वजे मृत्यु भयो । अक्सिजन लिन गएकाहरु रित्तै फर्किए । फोटो फाईलकाठमाडौ । पोखरामा अक्सिजन अभावमा एक सुत्केरी सहित ७ जनाको मृत्यु भएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक सुत्केरी महिलासहित ७ जनाको बिहीबार राति मृत्यु भएको हो ।
अन्त्यमा हिमाल आरोहण गर्नेले प्रयोग गर्ने सानो अक्सिजन सिलिण्डरले भएपनि बचाउन खोजिएको थियो । तर यता सुत्केरीको राती करिब साढे १० वजे मृत्यु भयो । अक्सिजन लिन गएकाहरु रित्तै फर्किए । फोटो फाईल
Prevआज राति भ्वाईस अफ नेपाल आउँछ कि आउँदैन ?
Nextस्नेही काखकी आमा श्रीनेहा एक्कासी हस्पिटलमा
यी राशिका व्यक्तिले गर्दैनन् सकेसम्म पैसा खर्च, बचत गर्ने हुन्छ अचम्मको क्षमता
भर्खरै सवारीसाधनको लागि सरकारले लागु गर्‍यो यस्तो कडा नियम
भखरै बिहे भएका यी नब जोडीमा कोरोनाको कहरले उजाडीयो बसाएको संसार
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्याल (10177)
केएमसी अस्पतालमा एकदिनको अन्तरालमै दम्पतिको मृत्यु, ६ वर्षीया छोरीको भावुक सन्देश! (2046)